Iskaashatooyinka gobolka ayaa lagu wadaa inay bedelaan kuwa iibiya sibidhka | Addis Maleda
መነሻ ገጽSoomaaliWararka AbolIskaashatooyinka gobolka ayaa lagu wadaa inay bedelaan kuwa iibiya sibidhka
Wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga gobolladu waxay sheegtay inay socdaan hawlo lagu bedelayo ganacsatada sibidhka, laguna bedeli lahaa iskaashatooyinka macaamiisha ee gobol kasta.
Agaasimaha Isgaadhsiinta ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Xidhiidhka Gobalada Kumneger Eshetu oo saaka u waramayay Wargeyska Addis maleda ayaa sheegay in halka kiintal ee Sibidhka ah lagu kala iibsanayo suuqa lacag dhan 1,100 Birr, taasi oo ay ugu wacan tahay wax soo saarka sibidhka ee suuqa ka jira.
Waxa u sheegay in ujeedada laga leeyahay ay tahay in la yareeyo dhibaatada jirta, isla markaana bulshada ay helaan wax soo saarka sibidhka.
Waxa kale oo uu sheegay in la dajiyay nidaam si toos ah dadka wax u iibsada loo gaadhsiiyo agabka ay u baahan yihiin ee magaalooyinka waaweyn si kor loogu qaado doorka ganacsatada.
Waxa intaa dheer in shirkaddu ay maamuli doonto qaybinta laga bilaabo albaabka warshada ilaa macmiisha wax ku iibinaysa iyadoo meesha ka saaraysa dhaqamada kale ee adag ee qarsoon ee ay ka mid yihiin suuqgeynta badeecada sibidhka iyo silsilada isku xidhka ah.
Marka laga soo tago furitaanka warshado lagu qaybiyo sibidhka oo laga furay magaalooyinka waaweyn, waxa kale oo wasaaraddu fududayn doontaa sidii badeecada loo gaadhsiin lahaa dadka ajaanibka ah iyo kuwa jumlalayaasha ah iyo ururada macaamiisha iyada oo loo sii marayo tafaariiqleyaal.
Wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga gobolka ayaa sheegtay in wershadaha ku yaalla deegaannada ay dhibaatooyinka amni darro ka geystaan Itoobiya ay sabab u tahay soo saarista sibidhka oo gabaabsi ah.
Wasaaraddu waxay kala shaqayn doontaa sidii ay warshaduhu u bedeli lahaayeen mishiinada burburay sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka, gaar ahaana dhibaatooyinka ay warshada Sibidhka ee Habesha Cement iyo Mugher Cement ay si buuxda u soo saari karaan.
Waxaa taageero iyo dabagal gaar ah lagu samayn doonaa sidii loo dhamaystiri lahaa dhismaha warshada wayn ee sibidhka ee laga dhisayo deegaanka North Shoa ee Gobolka Axmaarada.
Waxa uu sheegay in Wasaaradda Ganacsiga iyo Iskaashiga deegaanada ay waddo qorshe fog oo lagu balaadhinayo warshado cusub oo sibidhka, gaar ahaan meelaha laga helo agabka ceeriinka ah, iyadoo la siinayo taageero maalgashi oo dhiirigelinaysa maalgashadayaasha ganacsiga.
Sida ay sheegtay wasaaraddu, inta badan warshaduhu waxay saamayn taban ku yeesheen suuqa sibidhka, kaddib markii ay si xad dhaaf ah u bixiyeen wax soo saarkooda.
Previous article300 oo qof oo ku nool Hawassa ayaa sheegay in aan wax magdhow ah la siin muddo saddex sano ah
Next articleHal bil gudaheed, in ka badan 26 qof ayaa lagu dilay Gobalka Konso
Magaalaa Finfinneetti ji’oota 11 darbanitti namoonni 23 gamoo irraa kufanii du’uun isaanii ibsame